သတင်း - Kalimba ၏ ညည်းညူမှုကို ဖြေရှင်းနည်း | GECKO
17 key ကို kalimba
15 key ကို kalimba
10 key ကို kalimba
8 key ကို kalimba
Cajon high-end မော်ဒယ်များ
Cajon & Kalimba ဗီဒီယို
Kalimba ၏ ညည်းညူခြင်းကို ဖြေရှင်းနည်း GECKO
Kalimba အာဖရိကတွင် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာများရှိသော အမျိုးသားဂီတတူရိယာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် စန္ဒယားကိုယ်ထည်၏ ပါးလွှာသောအပိုင်းများကို လက်မဖြင့်ထိခြင်း (ခေတ်သစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အဓိကအားဖြင့် သစ်သား၊ ဝါးနှင့် သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်)။
mbira ဟုလည်းသိကြသော Kalimba သည် သတင်းအချက်အလက်များ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြန့်ဝေခြင်းတွင် ကွဲပြားခြားနားပြီး မသင့်လျော်သောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တကယ်တော့၊ ကင်ညာမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် Kalimba လို့ခေါ်တယ်၊ ဇင်ဘာဘွေမှာ ဒီလိုစန္ဒယားမျိုးရဲ့ နာမည်အရင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။Mbira ကွန်ဂိုက ခေါ်တယ်။Likembe၎င်းတွင် Sanza နှင့် အမည်များပါရှိသည်။စန္ဒယားလှံတံနောက် ... ပြီးတော့။
ဒါဆို ဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့ Kalimba တူရိယာက ဘာကြောင့် ညည်းညူနေရတာလဲ။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် Kalimba သည် အောက်ပါအကြောင်းပြချက်များထက် မပိုပါ ၊
1. သော့များနှင့် သံမဏိခေါင်းအုံးများကြား ထပ်ခါထပ်ခါ ပွတ်တိုက်မိပါက မပြည့်စုံသော ခေါင်းအုံးများဆီသို့ ဦးတည်စေသည်။
2. Kalimba သော့များ (shrapnel) သတ္တုကုန်ကြမ်းများနှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည့် elasticity အားနည်းခြင်းကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသော သတ္တုပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း။
3. ထုတ်လုပ်သူအနည်းစုတွင် စျေးပေါသောကုန်ကြမ်းများရှိပြီး ညံ့ဖျင်းသောပုံသေစန္ဒယားဘောင်များကို ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုပါသည်။
4. စန္ဒယားသည် စက်ရုံမှထွက်ခွာသောအခါ၊ QC အမှတ်တံဆိပ်အချို့သည် စန္ဒယားအား တင်းကြပ်စွာစစ်ဆေးပြီး အမှားရှာခြင်းမပြုပါ (အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ)။
အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရင်းများကြောင့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ကို သင်ကြားပေးပါမည်။
1. သော့ကို ဘယ် သို့မဟုတ် ညာသို့ ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ဆူညံသံကို ဖြေရှင်းပါ၊ သို့မဟုတ် ရှေ့သို့ရွှေ့ပြီး သော့ကို တွန်းကာ ရွေ့လျားသွားသည့်အတိုင်း တံတားထဲသို့ ကြိတ်ခြင်းဖြင့် ဆူညံသံကို ဖြေရှင်းပါ။
2. သော့နှင့် ခေါင်းအုံးကို ပေါင်းစပ်ထားသော စက္ကူကို အုပ်ထားပါ (ဤနည်းလမ်းသည် ယာယီသာဖြစ်သည်) သာမန်ရုံးသုံးစက္ကူ သို့မဟုတ် A4 စက္ကူတစ်ရွက်ကို 0.3cm x 0.3cm ခန့်ရှည်သော အမြှောင်းများအဖြစ် ဖြတ်လိုက်ပါ။ (ပိုပါးလေ ပိုကောင်းသည်)။
သော့ကို မြှောက်ပြီး သော့နှင့် ခေါင်းအုံးကြားတွင် မှတ်စုကို လျှောလိုက်ပါ။ စာရွက်ကို ကပ်သွားသည်အထိ သော့ချ၍ ပိုနေသောစက္ကူကို ဆုတ်ဖြဲလိုက်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများသည် ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းမရှိသေးပါက ၎င်းကိုအစားထိုးရန်အတွက် set (Kalimba metal shrapnel, pick, keys) ကိုဝယ်ယူရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါသည် Kalimba ၏ ညည်းညူမှုကို ဖြေရှင်းနည်း၏ နိဒါန်းဖြစ်သည်။ Kalimba အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
GECKO ထုတ်ကုန်များအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာပါ။
kalimba သီချင်းများကို စတင်သူ
အာဖရိက Kalimba Thumb စန္ဒယား
၁။ Kalimba ရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
၂။ မြင်မြင်ချင်း၊ GECKO Kalimba က ဆွဲဆောင်တယ်။
၃။ Kalimba ၏ကစားစွမ်းရည်
© Copyright - 2017-2022: အားလုံးအခွင့်အရေး။